मासिक ७०/८० हजार रुपैयाँ कमाउन गाह्रो छैन - साहित्य - साप्ताहिक
मासिक ७०/८० हजार रुपैयाँ कमाउन गाह्रो छैन
- नरेन्द्र रौले
वैशाख १९, २०७४
रंगकर्म र साहित्य लेखन दुवैमा उत्तिकै सक्रिय छन्— टंक चौलागार्इं । हालसालै उनको उपन्यास टालाटुली सार्वजनिक भएको छ । भीष्म सहानीले हिन्दीमा लेखेको नाटक माधवीलाई नेपालीकरण गरेर निर्देशन गरेपछि चौलागाईं चर्चामा आएका थिए । यसअघि काठमाडौं गीत, जीरो कटेजजस्ता पुस्तक प्रकाशित गरिसकेका चौलागार्इंसँग नरेन्द्र रौलेको कुराकानी :
तपाईं रंगकर्म र लेखनमा उत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ । आफूलाई के भनेर चिनाउन चाहनुहुन्छ ?
म पहिले रंगकर्मी, त्यसपछि मात्र लेखक हुँ ।
कसरी रंगकर्ममा लाग्नुभयो ?
कामको खोजी तीव्र थियो । एक्लो छोरो भएकाले बुबाआमाले विदेश जान दिनुभएन । देशमा संकटकाल थियो । बुबाआमाले आर्मी–पुलिसमा जान पनि नदिने । त्यही क्रममा क्याम्पसमा ‘नि:शुल्क अभिनय’ भनेर टाँसिएको एउटा सूचनामा मेरो आँखा गयो । म त्यहाँ अभिनय सिक्न गएँ । यसरी मेरो जीवनमा रंगकर्म सुरु भयो ।
रंगकर्मको सुरुवात कसरी गरियो ?
सरुभक्तले लेख्नुभएको जिउँदा अवशेषहरू नाटकमा अभिनय गरियो । आफंैले चाहिं ०६२/६३ को जनआन्दोलनताका मधुरिमा शीर्षकको नाटक लेखें । मधु र रिमालाई पात्र बनाएर लेखिएको उक्त नाटकको निर्देशन पनि म आफैंले गरें । त्यो नाटक राष्ट्रिय नाचघरले आयोजना गरेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय नाटक महोत्सवमा मञ्चन पनि भयो ।
बालसाहित्यबाट आफ्नो लेखन सुरु गर्नुभयो । कस्तो अनुभव बटुल्नुभयो ?
बालसाहित्यमा जति लेखियो सबै वास्तविक कथा लेखियो । त्यतिबेला साहित्यको रस थाहै नपाई लेखियो । पत्रपत्रिकाहरूमा बालवालिकाहरूका सत्य कथा छापिएपछि कतिले छात्रवृत्ति पनि पाए । आफूले गरेका यस्ता प्रयासको सकारात्मक प्रभाब सम्झँदा खुसी लाग्छ ।
पुस्तक लेखनतिर कसरी आकर्षित भइयो ?
पहिलो पुस्तक साइन्स फिक्सन जिरो कटेज थाहै नपाई लेखें । दोस्रो उपन्यास काठमाडौं गीतचाहिं सेलिब्रिटी बन्छु भन्ने रहरले लेखिएको हो । ती दुइटै पुस्तकपछि मेरो लेखन परिपक्व भैसकेको छैन भन्ने थाहा भयो । पाठकहरूले सामान्य कथा रुचाउने रहेछन् ।
हालै बजारमा आएको पुस्तक टालाटुली कुन विषयमा केन्द्रित छ ?
आश्रममा बस्ने असहाय वृद्धवृद्धाहरूको कथा टालाटुलीको मूल कथा हो । यसमासन्तानले छाडेर गएपछि वृद्धवृद्धाहरूको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चित्रण गरिएको छ । यो सत्यकथा हो । यसमा थोरै मेरो कल्पना पनि मिसाइएको छ ।
टालाटुली बजारमा ल्याउन कति समय लाग्यो ?
जम्मा तीन वर्ष । ६ महिनामै लेखिसके पनि मैले १४ पटक पुनर्लेखन गरें । त्यसपछि बल्ल चित्त बुझ्यो । यो मेरा अघिल्ला पुस्तकहरूको तुलनामा भाषा एवं प्रस्तुतिका हिसाबले पनि राम्रो छ । सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइरहेको छु ।
यतिबेला के गर्दै हुनुहुन्छ ?
म स्कुल, कलेजमा रंगमञ्च पढाइरहेको छु ।
अबको तयारी के छ ?
छिटै नै नाटकहरूको संग्रह किताबभित्र–किताबबाहिर आउँदैछ ।
रंगकर्म पढाउनु र लेख्नुमा के फरक पाउनुभयो ?
लेख्दा अलि सहजता महसुस हुन्छ । कुनै कथा टिप्यो, लेख्यो तर पढाउने कर्म भने अलि गार्‍है रहेछ । नाटकमा काम गर्न सजिलो छ । यो कलाकारका माध्यमबाट प्रदर्शन गरिने भएकाले सहज लाग्छ । कलाकारहरूले पनि राम्रो सल्लाह दिन्छन् । तत्काल आफ्नो भूमिका स्टेजमै देख्न पाइन्छ । सोचेभन्दा पनि राम्रो भइदिन्छ । फेरि त्यसमा लाइट, कलाकार, कथा, प्रस्तुति सबैको उत्तिकै भूमिका हुन्छ । फरक–फरक मानिसको साथ पनि हुन्छ । त्यसैले नाटक मञ्चन गर्न सजिलो छ, तर लेखन भने चुनौतीपुर्ण हुन्छ ।
नेपालमा बालसाहित्यको अवस्था कस्तो छ ?
अझै राम्रा पुस्तकको अभाव छ, तर प्रौढ साहित्यभन्दा बालसाहित्यको अवस्था राम्रो छ । रुचिअनुसारका पुस्तक छापिएका छन् । लेख्नुपर्ने जति भने अझै लेखिएको पाइँदैन । बालसाहित्य लेखकलाई कसैले गन्दैनन् ।नाटक लेख्नेहरूको पनि खासै मान्यता पाइँदैन ।
तपाईंले अनुवाद गरेको माधवी नाटक लामो समय चल्यो । कमाइ कस्तो भयो ?
माधवी नाटक २२ दिन चल्यो । त्यसले रेकर्ड नै राख्यो भने ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ कमाइ भयो । उक्त नाटकमा मैले तीन वर्ष कडा मेहनत गरेको छु ।
रंगकर्मको भविष्य कस्तो छ ? यसमै लागेर जीवन धान्न सकिन्छ ?
म रंगकर्ममा रमाइरहेको छु । स्कुल–कलेजमा नाटक पढाउँछु । म मासिक ७०/८० हजार रुपैयाँ कमाउँछु । अझै पनि पढाउनका लागि धेरैतिरबाट प्रस्ताव आइरहेको छ । मेरो अनुभवमा राम्रै सम्भावना छ ।
कुन समयमा लेख्नुहुन्छ ?
मलाई भीडभाड मन पर्छ । कोलाहल मनपर्छ । आफू शान्त हुन्छु, तर वरिपरि भने चहलपहलपूर्ण वातावरण मनपर्छ । म प्राय: बिहानको समयमा लेख्न रुचाउँछु । गीत सुन्दै लेख्ने बानी छ । दिमागमा कुनै प्लट आयो भने राति १२ बजे पनि लेख्न बस्छु ।
अरू लेखकका पुस्तक कत्तिको पढ्नुहुन्छ ?
पाएसम्म पढ्छु । नेपाली लेखकहरूमा नयनराज पाण्डे, नारायण ढकाल तथा बुद्धिसागरको पढ्न छुटाउँदिनँ । उहाँहरूको लेखनमा हाम्रै समाजमा पात्र एवं सुहाउँदो विषयवस्तु फेला पर्छन् ।
तपाईंका प्रिय पुस्तक ?
डोरबहादुर विष्टको सोताला असाध्यै मनपर्छ । यसमा पुरानो काठमाडौंको कथा समेटिएको छ । मैले यो पुस्तक पाँच पटक दोहोर्‍याएँ हुँला । त्यस्तै प्रेतकल्प र उलार पनि मेरा प्रिय पुस्तक हुन् ।
अध्यापन एवं लेखन कर्ममा संलग्न हुनुहुन्छ । समय कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
यी सबै कलाका काम हुन् । मासु पसल वा तरकारी पसल गरेको भए मलाई गार्‍हो हुन्थ्यो होला, यी दुवै एउटै क्षेत्र भएर पनि काम गर्न सजिलो भएको हो ।
झ्याप्प केश पाल्नुभएको छ । यसमा केही रहस्य छ कि ?
मैले रहरले पालेको होइन । थिएटरमा काम गर्न अरूभन्दा फरक हुुनुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो । कसरी फरक हुने भनेर सोच्थें । त्यही सोचले केश पालेको हो । म वर्षमा एकपटक मात्र केश काट्छु ।
रंगकर्ममा आउन चाहनेहरूलाई के सुझाव छ ?
यो क्षेत्रमा हतार गर्नेहरू टिक्दैनन् । सफलताका लागि धैर्यता चाहिन्छ । थिएटरमा काम गर्न त्यति सजिलो छैन । धैर्यता, अध्ययन एवं काम गर्ने समर्पण बोकेर आए केही गरेर देखाउन सकिन्छ ।
प्रकाशित :वैशाख १९, २०७४
कम छैन गुगल पनि
नाइँ मलाई थाहा छैन
शम्भु प्रधानको माग जायज छैन
राष्ट्रलाई हजार मूर्ति उपहार दिने सपना
३० हजार भूकम्पका धक्का
नारायण वाग्लेको कोरियाना कफी गफ पुस १९, २०७५
यस वर्षको पहिचान पुरस्कार आफर र नथियालाई पुस १५, २०७५
क्यान्सर जीवनको अमूल्य अनुभव : मनिषा कोइराला पुस ३, २०७५
लेखनलाई विद्रोहको माध्यम बनाए मंसिर २९, २०७५
पोखरामा साहित्य उत्सव मंसिर २३, २०७५
नेपालबाहिर बसेर साहित्य सिर्जना गर्नेहरू मंसिर २२, २०७५
फेरि मधुवनमा कार्तिक १८, २०७५
भाइरल ब्वाइ कार्तिक १, २०७५
गीत आश्विन ३१, २०७५
छड्के आश्विन ३०, २०७५